”हामि पनि स्वच्छ सफा घरआँगनमा बाच्न पाउने भए” -
”हामि पनि स्वच्छ सफा घरआँगनमा बाच्न पाउने भए”
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १४, २०७५ समय: ११:०७:४०
झुम्का,चैत्र १४ । फुसको घर टहरा जस्तो सानो घरमा परिवार बालबालिका सहित बर्मालाल मुसहरले जिवन गुजारा गर्दै आएका थिए । घरको दुईछाक टार्न धौ–धौ परेको बेला बालबालिकालाई स्याहार गर्न पनि कठिन अवस्था छ । बाहिर सौचगर्ने बाध्यताले घरवरिपरि पारिवारका सदस्य फोहोरले ग्रसित भईरहेको रामधुनी वडा नं. ३ पिप्रांहा मुसहर बस्तिका बर्मालालले सुनाए ।
बालबालिकालाई स्वच्छ बतावारणमा बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सक्ने ईच्छाहुदा हुदै पनि गर्न नसकेको अर्का स्थानिय दिपलाल मुसहरले बताए । सौचालय बिनाको घर,आर्थिक अवस्था कमजोरले सताईरहन्थ्यो भनेर सानो स्वरमा आफ्नो भनाई राखे । दुखि भएपनि जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोगमा पक्की घर संगै सौचालय निर्माण हुने भएपछि उनीहरु केहि खुसि देखिन्थे । लगभग निर्माण हुनै लागेपनि टिनको छानो झ्याल ढोका र सौचालय बनाउन बाँकि रहेको छ । यसकालागी पनि रकम उपलबध गराई सकेको छ ।
अबका दिनमा हाम्रा बालबालिका पनि स्वच्छ वातावरणमा खेल्न पाउने रमाउने लगायत आफु पनि घरब्यवहार जोहो गर्न सक्ने साहस आएको गालो मसुहरले बताईन् । उन्ले भनिन् बाँसको र फुसको घरले बर्षेनि बनाउनु पथ्र्यो,बचत गरेको रकम पनि सिद्धिन्थ्यो अब पक्की घर भएपछि बचत भएको रकमले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षामा पनि प्रोत्साहन गर्न सक्ने बताईन् ।
जनताआवास कार्यक्रम अन्तर्गत रामधुनी वडा नं. ३ पिप्राहाका मुसहर बस्तिमा अवास निर्माणकालागी बुधवार तेस्रो किस्ता स्वरुप रकम हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो र दोस्रो किस्ताले दुई कोठाको पक्की दिवाल र पिलर निर्माण भईसकेपछि टिनको छानो,झ्याल ढोका र शौचालयकालागी तेस्रो किस्ता निकासा भएको हो । तेस्रो किस्ताले घर पुर्ण रुपमा निर्माण गर्दै हस्तान्तरण पश्चात चौथो किस्ता उपलब्ध गाराउने छ ।
सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन कार्यलय बिराटनगरबाट निकासा भई बुधवार १७ जनालाई १ लाख १६ हजार तिनसय पैतालिस रुपैयाको दरले हस्तान्तरण गरेको हो । सो अनुसारको रकम मंगलवार ८ जनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकी १० जनालाई बिहिवार बितरण गरेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सिमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम रामधुनीमा ३५ घर परिवारलाई समेटेको छ । रकम बितरण साईट ईन्जिनियर ओम प्रकाश शर्मा,राम साह, ३ नम्बर वडासदस्य नारायण श्रेष्ठले बितरण गरेका हुन् ।
रामधुनीमा ३५ घरपरिवारको अवासालागी १ करोड १६ लाख ३७ हजार पाँच सय रहेको छ । १ घर बराबर ३ लाख ३२ हजार पाँचसयका दरले उपलब्धगराईने जानकारी दिएको छ । जनसहभागीता १० प्रतिशत रहेको छ । निर्माणकालागी हाल सम्म २ लाख ९८ हजार उपलब्ध गराई सकेको वडासदस्य नारायण श्रेष्ठले बताए । पहिलो र दोस्रो किस्ता केन्द्रियबाट निकास भएपनि १ नम्बर प्रदेशमा सहरी बिकास डिभिजन कार्यालय नहुदा तेस्रो किस्ताको निकासा ९ महिना सम्म हुन नसकेकोे श्रेष्ठले बताउदै धेरै पटकको पहल पछि झापा र मोरंग भन्दा पहिलै निकासा गरेर हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । आफ्नो घर बनाउन नसक्ने नागरिकका लागि राज्यले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम झापा,मोरंग र सुनसरीगरी जम्मा १ हजार १ सय २९ घर निर्माण भईरहेको छ ।
सरकारले ल्याएको आवास निर्माण कार्यक्रमले बिपन्नलाई सहयोग भएको नेपालि काग्रेश रामधुनी नगर सचिव दिलु राईले बताए । बुधवार तेस्रो किस्ता बितरण कार्यक्रममा उपस्थित राईले जनताआवास कार्यक्रम रामधुनीमा फलदायी रह्यो । यसले मुसहर बस्तिमा परिवर्तन ल्याउने धारणा ब्यक्त गरे ।